Sababootaa fi furmaata waliin oduu warra fooyya’iinsa booda duubatti deebi’anii-Dursa - Ibsaa Jireenyaa
Faaruun hundi kan Rabbii Gooftaa Aalamaa ta’eeti. Nageenyi fi rahmanni nabiyyoota fi Ergamtoota hundarra kabajamaa kan ta’e Nabiyyii keenya Muhammad irratti haa jiraatu. Maatii fi sahaabota isaa hundarrattis haa jiraatu.
Itti fufuun: fooyya’insa booda duubatti deebi’uun karaa sadiin hubatamuu danda’a:
1-Amantii Rabbii (Islaamaa) irraa duubatti deebi’uu
2-Qajeelfamoota Rabbii qabachuu dhiisuu
3-Da’awaa gochuu erga jalqabanii booda gochuu dhiisu
Fooyya’iinsa booda duubatti deebi’uun yeroma biiftuun Islaamaa mul’achuu eegalu ifa bahe. Garuu yeroo ammaa kana keessa garmalee cimuun isaa daran ifa kan ta’eedha.
Fooyya’iinsa booda duubatti deebi’uun Islaamaan kan walitti hidhamee miti. Kana irra, Ibliisni uumama jalqabaa seenaa keessatti fooyya’insa booda duubatti deebi’eedha. Akkuma kana, seenaan ilmaan Israa’il oduu kana fakkaataniin kan guuttameedha. Duubatti deebi’uu kanaaf sababoota baay’eetu jira. Kitaaba kana keessatti fedhii Rabbiitiin nan dhiyeessa.
Kanaaf, wanti Muslimni hundi beeku qabu: qalbiin ilma namaa harka isaa keessaa miti, kana irra harka Khaaliqa isaati. Hanga duuti isatti dhuftutti amantii kana qabachuuf wanta danda’e hunda gochuu qaba. Akkuma Rabbiin olta’aan jedhe:
Dhugumatti yommuu mata duree kana kaa’u dubbisaan kabajamaan kana akka beeku nan jaalladha:
1-Ani sababoota nan dhiyeessa. Sababoota kana irraa baay’een isaanii ilaalcha dhuunfaa dogongoraa fi sirriif saaxilamu danda’aniidha.
2-Mata duree kanaaf furmaannis akkuma kan armaan olii karaa dhuunfaatin kan ta’eedha.
3-Ani mata duree kana gara hundaan haguuge jechuun hin odeessu.
4-Ani nama fooyya’iinsa booda duubatti deebi’etti hin qoosu. Kanarraa Rabbiin eeggama. Garuu barnootaa fi gorsa irraa fudhachuufi: “Dhugumatti, seenaa isaanii keessa warra sammuu qabaniif barnootatu jira.” (Suuratu Yuusuf 12:111)
5-Namni sarara kana barreessu akkuma namoota biroo mucucaachu akkanaatti kufuu irraa of hin amanu. Kana irra, ofii fi obboleeyyan kiyyaaf gadi dhaabbannaa kadha.
6- Wanta isarratti dhiibbaa uumee ykn dogongora arge ilaalchise dubbisaa kabajamaa irraa gorsaa fi qajeelcha akka naaf kennu nan abdadha.
Jechii Rabbii olta’aa kuni akka yeroo hundaa dhaadannoo keenya ta’uuf xumura dursaa kanaa irratti obboleeyyan kiyya hundaaf ni jedha: “Gooftaa keenya! Erga nu qajeelchite booda qalbii teenya hin jallisin.” Suuratu Aali-Imraan 3:8
Yaa obboleeyyan kiyya namni eeggamaan nama Rabbiin eegedha:
Seenaa dubbisii, isa keessa barnootatu jiraa.
Namoonni seenaa hin beekne jallatanii jiruu
Seenaan namoota duubatti deebi’an kanniinin kan guuttameedha. Haa beeknu, osoo ganda godoonsaa (hijraa) keessa jiruu nama duubatti deebi’etu jira. Nama qalbii qabuuf inni fakkeenya ta’uun gahaadha. Rabbiitu nama milkeessa.
Saalih ibn Muqbil Al-Useymiyitu barreesse
Riyaad- akka lakkoofsa hijraatti bara 1415
Min Akhbaaril Muntakisiina ma’al asbaabi wal ilaaji
Sababootaa fi Furmaata waliin Oduu warra Fooyya'iinsa booda duubatti deebi'anii-Seensa